Nnwom 67 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica América Latina
Nnwom 67 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Onyankopɔn, hu yɛn mmɔbɔ na hyira yɛn. Fa w’adɔe hwɛ yɛn, 2 na ama wiase nyinaa ahu wo pɛ; na ama aman nyinaa ahu wo pɛ; na ama aman nyinaa ahu wo nkwagye. 3 Ma adasamma nkamfo wo, O Onyankopɔn; ma nnipa nyinaa nkamfo wo! 4 Ma aman ani nnye na wɔnto ahosɛpɛw nnwom efisɛ, wubuu nnipa atɛntrenee na wokyerɛɛ aman a ɛwɔ asase so kwan. 5 Ma adasamma nkamfo wo, O, Onyankopɔn; ma nnipa nyinaa nkamfo wo! 6 Asase no abɔ n’aduan; Onyankopɔn, yɛn Nyankopɔn ahyira yɛn. 7 Onyankopɔn ahyira yɛn. Nnipa a wɔwɔ mmaa nyinaa nhyɛ no anuonyam.
NA-TWI : Nnwom 67